Xasan Sheekh oo Xuquuq ku yeelanaya Dowlada Soomaaliya – Puntland Post
Posted on July 15, 2017 by Cowke
Xasan Sheekh oo Xuquuq ku yeelanaya Dowlada Soomaaliya
Golaha wasiirada Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa Kulankooda Todobaadlaha ah oo ay khamiistii ku yeeshteyn Magaalada Kismaayo waxa ay kaga hadleyn Arrimo dhowr ah, qodobada Golaha wasiirada ay qaadaadhigeyn waxaa kamid aheyd in xuquuq la siiyo Madaxweynihii Hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta Xukuumada Fderaalka Soomaaliya Eng C/raxmaan Cumar Yariisoow oo warbahinta u akhriyey waxa a wasiirada ka wada hadleyn ayaa waxa uu sheegey in si wadar ogol ah ay wasiirada iskula garteyn in xaquuq la siiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud.
Weli lama shaacin cadadka lacagta xaquuqda lagu sheegay oo ay Golaha wasiirada isku wafaqeyn in la siiyo Xasan Shiikh Maxamuud, waxaase wasiir yariisoow uu sheegay in soo jeedintaasi loo gudbin doono Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa hada ah Xubin ka tirsan Golaha shacabka Soomaaliya , xubinimadaasi oo uu ku helay qodob dastuuri ah oo dhiga Dastuurka qabyo qoraalka Somaaliya.
One comment on “Xasan Sheekh oo Xuquuq ku yeelanaya Dowlada Soomaaliya”
waa ayaan darro haddii tuugii Somali dhacay oo guryaha ka dhistay hantidii ummadda hadana lagu abaal mariyo xuquuq , waa ayaan darro ninkii khaa’in wadanka ahaa ee Jigjiga tagay oo ku dhaqaayay in Somaliya ay khalad ahayd in weerarto Ethiopa, tuug, khaa’in wadan , qabyaaliste liita hadana abaal marin waa ayaan darro waxa ay ku kaceen Farmaajo iyo Khayr. dhici kartee in tuugta ilma Gabre ee baarlamaanka ku jira lagu dejinaayo, lakiin Xasan sheikh ma istaahilo wax wanaag ah.